Innovate's Liquid Detergent Agitator Series inoumbwa ne Main poto, inomutsa sisitimu, kudziyisa sisitimu, yevhisi system, yekudzora system uye rack chikuva, nezvimwe.
Agitator yakakodzera kune kusanganisa, kupera uye homogenizing dzakasiyana viscous mvura. Iyo yekusanganisa sisitimu yakagadzirirwa neunidirectional kana bidirectional wall-kukwenya agitator uye frequency kutonga. Iyo hari huru inogona kudziirwa uye kutonhorera sezvazvinodiwa. Muchina uyu wakakodzera maindasitiri senge mvura yekushambidza, machira anobatsira mumiririri, hutano & zvekurapa, chikafu & zvinwiwa, zvinonhuwira uye yakanaka kemikari mainjiniya, nezvimwe.
Inotyisa Simba (kw)
Zvinotyisa Rate (rpm)
Stainless simbi yekudzora kabhodhi, kutonga ne bhatani
Chiyero （R / MIN）
Pashure: Vacuum Emulsifying chisanganiso
Zvadaro: Mafuta anosanganiswa nemvura phacoemulsification inopisa magetsi-ekuchengetedza michina